YINTONI OMAWUYILAHLE XA UCHITHA KOBU BUSIKA - KWENZIWA KANJANI
Yintoni omawuyilahle xa uchitha kobu busika
Ukucoca kunye nokutshatyalaliswa kudala kufana nentwasahlobo, kodwa ubusika ngokwenene lixesha elifanelekileyo. Sonke sichitha ixesha lethu elininzi lokuphumla ngaphakathi xa kubanda, kutheni ke ungavelisi kwaye uhlaziye indawo yakho yokuhlala? Kulula kakhulu ukonwabela naliphi na igumbi xa lingaxutywanga, kwaye uya kuba ne-jumpstart ekucoceni kwentwasahlobo. Nje ukuba izinto zakho zicwangcisiwe, cinga ngokuphinda uzisebenzise okanye unikele kangangoko unakho kwindawo yokuhlala engenzi ngeniso.
UAndrei Lavrinov / Getty Izithombe
Njengoko ubeka iimpahla zakho zasehlotyeni ngokuthanda iijezi ezibhityileyo kunye neminqwazi emdaka, coca ikhabethe lakho kwizinto zasebusika ongasazinxibiyo. Iimpahla zasebusika zinokubetha kakhulu, ngoko ke lahla iziqwenga ezinxibe kakhulu, ezingasafanelanga, okanye ukuba awusayi kuphinda uzinxibe. Ukuba kunokwenzeka, yenza oku ngaphambi kokuba ubusika bungene ngokwenene kwaye unikele ngamaqhekeza akwimo efanelekileyo ukuze aye kumntu ofuna impahla eshushu.
Iimuvi kunye nemidlalo
UErich Karnberger / Getty Images
Ubusuku obubandayo basebusika bukulungele ukuzonwabisa kunye neziselo ezifudumele kunye nemidlalo yebhodi okanye imuvi oyithandayo. Qaphela ukuba zeziphi iimuvi ofuna ukuzibukela rhoqo, kunye nokuba yeyiphi imidlalo ongenako ukwanela kuyo. Gcina ezo kwaye ucinge ngokususa ezinye. Amathuba kukuba, uninzi lweemovie ezidumileyo onazo ziyafumaneka kwinkonzo yokusasaza osele uyibhalisele.
Chris_Soucy / Getty Imifanekiso
Xa uhombisa iiholide, ngaba usebenzisa zonke izinto zakho zokuhombisa? Ukuba akunjalo, lixesha lokuvalelisa kwezinye zazo. Imihombiso yeholide isenokungabambeki kakuhle emva kweminyaka ixhonywe ngokuphindaphindiweyo, ithotywa, kwaye igcinwe, kwaye kukho iindlela eziqinisekileyo xa kufikwa kwisihombiso sexesha lonyaka. Ukuba unezinto ezigugileyo okanye ezonakeleyo, okanye zicace gca ukusuka kwixesha elahlukileyo, akukho ngqiqo yokuba uzigcinele omnye unyaka.
Ezemidlalo kunye nezixhobo zokuzonwabisa
AndreyPopov / Getty Imifanekiso
Nokuba unengqokelela enzulu yezixhobo zokukhempa okanye abantwana bakho badlala imidlalo emininzi, izixhobo zokuzonwabisa zithatha indawo eninzi yexabiso. Ibuye iguge ngokuhamba kwexesha, kwaye kwimeko yempahla ethile, imbi kakhulu. Sebenzisa eli xesha ukutyhubela konke, ususa izinto ezingasasebenziyo, ezingasafanelekiyo, okanye ezifuna ukutshintshwa okanye ukuphuculwa.
elenaleonova / Getty Imifanekiso
Iincwadi zezinye zezinto eziqokelelwa phantse ngumntu wonke. Abantu bayakuthanda ukubapha njengezipho kwaye basebenza kakhulu, kunokuba nzima ukwahlukana nabo. Inyaniso, nangona kunjalo, umntu unokuba (kwaye afunde) kuphela iincwadi ezininzi. Ukuzicoca kwaye ucuthe ingqokelela yakho kunokukuvumela ukuba wonwabele ezo ugqibe ekubeni uzigcine - uninzi lwazo osele uzilibele nokuba unazo. Nikeza ezo ulahlayo esikolweni okanye kwithala leencwadi likawonke-wonke.
Phakathi kwezimemo zetheko leeholide, izikhumbuzo zokuphela konyaka kunye nezibhengezo zonyaka omtsha, unyuso lwengxowa-mali yesikolo, iikhathalogu zeeholide, kunye neposi eqhelekileyo yasekhaya, amaphepha anokufumba. Yenza kube yinto ephambili ukuhlenga-hlengisa kwiimfumba ezikhoyo kwaye uthathe inyathelo elikhawulezileyo. I-RSVP kwizimemo, thumela naziphi na iimpendulo eziyimfuneko, uhlaziye okanye urhoxise iinkonzo, kwaye uhlawule naziphi na iindleko ezingekahlawulwa. Hlehlisa okanye usebenzise kwakhona nantoni na ongenamdla kuyo okanye ongasayidingiyo, kubandakanywa neemagazini ezingaphezulu kweenyanga ezimbalwa ubudala (ukuba awukafundi, mhlawumbi awuzukuya).
knape / Getty Imifanekiso
Amakhandlela yenye into ewela kudidi lwezinto wonke umntu abonakala ebambelele kuyo. Ewe, ziyasebenza kwaye ewe, zibukeka kwaye zinevumba elimnandi. Nangona kunjalo, ukuba usoloko uthenga amakhandlela amatsha ngexesha ngalinye okanye unamakhandlela atshiswe ngokuyinxenye ahleli phantsi, awanikezi njongo kwaye athatha nje indawo. Ziphose ngaphandle okanye ziphinde zisetyenziswe ngokuzisika zibe zizikwere ezincinci kwaye uzinyibilikise kwisifudumezi-mali.
Amayeza kunye neemveliso zokuhlamba
smartstock / Getty Imifanekiso
Ukuphela konyaka lixesha elihle lokuhamba kwindawo yakho yokuhlambela kunye neekhabhathi zamayeza. Gcoba onke amayeza aphelelwe lixesha kunye neevithamini kunye nezinto zokuthambisa ezisele zisetyenzisiwe, ukuhlamba umzimba, kunye nezinye izinto zokuhlambela. Nantoni na ethe yahlukana ngokubonakalayo, izinto ezingasanukanga ngendlela ebekufanele, nayo nantoni na ebihleli ingavulwanga ukusukela kunyaka ophelileyo nayo kufuneka ilahlwe ngaphandle. Qiniseka ukuba ulahla iyeza ngokufanelekileyo endaweni yokulilahla nje emgqomeni. Khangela ekuhlaleni, njengoko uluntu oluninzi luphethe iintsuku ezikhethekileyo 'zokuthatha iziyobisi'.
JulNichols / Getty Imifanekiso
I-pantry yakho kunye neekhabhathi zasekhitshini yenye indawo apho izinto ezininzi ezindala kunye nezisetyenzisiweyo kancinci zihlala ziqokelelana. Ngobusika bexesha eliphambili lokubhaka, eli lixesha elifanelekileyo lokuthatha isitokhwe sezinto zakho eziphambili. Khulula iishelufu okanye iikhabhathi ngokupheleleyo, emva koko ujonge izinto ngokwazo ukuze ubone ukuba ziphelelwe lixesha na. Ezinye izinto zinokujika nokuba azikadluli umhla wokuphelelwa kwawo, ngoko jonga ngokubonakalayo kwaye ujoje yonke into. Lahla nantoni na embi okanye engaqondakaliyo, emva koko uhlengahlengise iishelufu zakho.
Tatiana Atamaniuk / Getty Imifanekiso
Ngehlobo sele lihambile kwaye lilindele elilandelayo, ubusika lixesha elihle lokuhamba kwi-wardrobe yemozulu efudumeleyo. Okokuqala, lahla nantoni na engalinganiyo okanye engenakulungiswa. Ukuba unezinto ongazinxibanga kwakanye ehlotyeni, lixesha lokuba uziyeke nazo. Kwakhona, ukuba uluhlobo lokufumana i-swimsuit entsha rhoqo ngexesha lonyaka, yamkele loo nto kwaye uphose ezindala zakho kwimfumba yokunikela.
ngoku tv amazon fire stick
imiyalezo yeengelosi 111
yintoni umyalelo wokubukela uthotho olumangalisayo
sesiphi isantya sebroadband endisidingayo
ungakanani ucathy brown